नेट्याटमो अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरु: नेटैटो
डोम » "नेटटमो" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
स्मार्ट हीटिंग - नेटाटोमो स्टार्टर किटको साथ
netatmo, नेटटमो हीटिंग, स्मार्ट हीटिंग
स्मार्ट हीटिंग सरल हुन सक्छ। एक घण्टा अघि यस अपार्टमेन्टमा स्मार्ट हीटिंग थिएन, तर यो पहिले नै छ। हामी तपाईंलाई यो नेटटामो स्टार्टर किटको उदाहरणको साथ देखाउँदछौं!
नेटटमो थर्मोस्टेट - स्मार्ट थर्मोस्टेट समीक्षा
netatmo, नेटटमो थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट
के नेटटमोले थर्मोस्टेटहरू बनाउन सक्छ? अवश्य! र हामी यसको लागि समीक्षा गर्नेछौं। त्यो हामी को हो ... शीतल;)
Apple HomeKit, अनबक्सिङ
स्मार्ट होम मार्च २०२१ भाग दुई! - मेरोस, नेटैटो
स्मार्ट होममा स्मार्ट होम ट्रेलर! मार्च २०२१ भाग दुई! यस भिडियोमा हामीसँग तपाईंको दुई उत्पादनकर्ताहरू Meross र Netatmo बाट अनबक्सिंग छ! हामीले उपकरणलाई Smartbest.pl र स्मार्टडोम.co स्टोरबाट पायौं
स्मार्ट Netatmo हेड - समीक्षा
टाउको, बुद्धिमान हीटिंग, netatmo, तताउने, स्मार्ट घर
लामो समयको लागि, हामी बौद्धिक हेडहरूको जाँच गर्न चाहन्थ्यौं। सारोटा पीआरलाई धन्यवाद, हामी परीक्षणको लागि नेटाटो स्टार्ट प्याक पाएका छौं, जसमा दुई बुद्धिमान टाउको समावेश छन्। त्यसोभए बुद्धिमानी नेटटमो टाउकोले कसरी काम गर्छ? तपाईं भर्खरकोमा पढ्नुहुनेछ ...
नेटटमो थर्मोस्टेट ओपनथर्मसँग काम गर्न सुरु गर्दछ
बायलर, netatmo, opentherm
नेटटमो फ्रान्सेली स्मार्ट होम कम्पनी हो जुन हाम्रो जागरूकतामा बढी बन्ने योजना छ। तिनीहरूको थर्मोस्टेट्सले ओपनथर्मसँग सहकार्य गर्दछ, धन्यबाद जुन उनीहरूले अझ निश्चित रूपमा बोयलरलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्। नेटटमो थर्मोस्टेट्स एक लोकप्रिय समाधान हो। तिनीहरू सस्तो छैनन्, तर ...
नेटटमो भिडियो डोरबेल - अन्तमा पोल्याण्डमा उपलब्ध छ
22 सेप्टेम्बर 2020
netatmo, भिडियो डोरबेल
भिडियो डोरबेल एक धेरै उपयोगी उपकरण हो। यसको लागि धन्यबाद, हामी सोफेबाट उठे बिना अगाडी ढोका पछाडि को छ भनेर जाँच गर्न सक्दछौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिडियो कलरहरूमध्ये एक नेटटामोबाट आएको थियो, जुन हाम्रो देशमा पनि उपलब्ध भयो। पहिले नै ...
नेटटमोले अलार्म साइरनको साथ नयाँ बाहिरी क्यामेरा रिलिज गर्दछ
netatmo, नेटटमो आउटडोर, नेटटमो स्वागत छ
नेटटमो स्मार्ट होम उपकरणको एक फ्रान्सेली निर्माता हो, जुन धेरै लोकप्रिय छ। अब, क्यामेरा उत्पादन पोर्टफोलियोमा थपिएको छ जुन एक भन्दा बढि घुसपैठिएर खोजी गर्दछ। नयाँ नेटटमो आउटडोर क्यामेरामा 105db साइरन छ। यो हुनु पर्छ ...
नेटटमो उत्पादनहरूमा पदोन्नति। VAT को बारे सबै सस्ता!
राम्रो स्मार्ट होम पदोन्नतीहरू पदोन्नति हुनुपर्दछ! :) र यस्तो पदोन्नति भर्खरै धेरै इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा देखा पर्‍यो। नेटटमो एउटा कम्पनी हो जसले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट होम उपकरणहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। तिनीहरूको क्यामेरा, टाउको ...
नेटटमो स्वागत क्यामेरा - भिडियो समीक्षा
होम क्यामेरा, netatmo, नेटटमो स्वागत छ
हामी हाम्रो युट्युब च्यानलमा अर्को भिडियो समीक्षा प्रकाशित गर्दछौं। नेटटमो वेलकम क्यामेरा एक धेरै प्रख्यात क्यामेरा हो जसले हालसालै होमकिट सुरक्षित भिडियो विकल्प प्राप्त गरेको छ। के यो अझै पनि एक लाभदायक खरीद हो र यसको पहिचान कसरी छ ...
अनबक्सि! - नेटटमो स्वागत छ!
क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, netatmo, नेटटमो स्वागत छ
अगाडि अर्को अनबक्सिंग! आज हामी नेटटमो स्वागत क्यामेरा अनप्याक गर्दछौं। बरु अनौठो प्याकेज भित्र के छ? सधैं जस्तो, तपाइँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा फेला पार्नुहुनेछ! तपाईंलाई हाम्रो लेख मनपर्‍यो? हाम्रो फेसबुक प्रोफाइलमा हामीलाई मनपराउनुहोस्! रुचि राख्नु ...